SIDA LOO ABUURO OO U KORAAN DUURJOOGTA DUURKA: BOGGA UGU FIICAN - SOOSAARKA DALAGGA
Rose Hip Cows: Geedka iyo Daryeelka
Muujinta abuurista beeraha daaweynta ee la yiraahdo Europe ee ku yaal boggiisa gaarka ah ayaa na soo gaadhay. Dhab ahaantii, waxaa muhiim ah in dhirta deyrta ee ma aha oo kaliya ay ku faraxsan yihiin qurxintooda, laakiin sidoo kale waxay keenaan faa'iidooyin caafimaad. In this article, waxaan ka hadli doonaa sida loo abuuro iyo koraan duur joogta guriga. Khabiirada iyo beeralayda khibrad leh ayaa diyaar u ah inay la wadaagaan talooyinka ugu fiican ee arrintan ku saabsan.
Beerta aqoonta ah waxaa lagula talinayaa, ka hor inta aan la qorsheynin meesha ay ku beeraan miskaha oo ku yaal goobta, si ay u doortaan noocyada digaagga duurjoogta ah. Indeed, waayo, abuuritaanka ee ugxan ah hal baadiyaha ah kuma filna. Ma noqon doonto suurtagal in la goosan karo, sababtoo ah si aad u hesho berry waxaad u baahan tahay ugu yaraan 2 dhirta sii kordhaya. Intaa waxaa dheer, waa inay isku dhafan yihiin. Dalagyada la oggol yahay ee noocyada iyo noocyada kala duwan, iyaga oo ku xiran beerahooda iyaga oo adeegsanaya habka abuurka.
Waa muhiim! Xirfadlayaashu waxay kala saaraan ku xoortay geedo dabiici ah oo hooseeya oo fiitamiin ah. Qaybaha ugu horreeya waxay sare u kacaan, on miro yar oo koob ah waxaa jira dalool wareeg ah. Kii labaad, caleemaha koobabka ayaa hoos loogu dhaadhiciyaa, oo hoos u dhacaya, waxay sameeyaan fiiqan cufan. Dadka dhexdiisa, foomka fiitamiinkiisu hooseeyo waxaa loo yaqaan "ey" oo ubax ah.
Marka xayawaanka la xalliyo, waxaad u eegi kartaa aagga beeritaanka. Fikrad ahaan, tani waa aag aad u iftiimay heer sare ah, halkaas oo dhulka madow iyo biyaha dhulka aan ku uruurin. Nidaamka asaasiga ah ee geedku waa mid aad u horumarsan, sidaa daraadeed wuxuu aad u sii dheeraa qoto dheer iyo ballaadhkiisa. Qoyaan xad dhaafka ah ayaa si fudud u burburin kara geedka.
Rosehip waxaa loo yaqaan 'Pink'. Rose ee suugaanta botaniya waxaa badanaa loo yaqaan dogka oo qudhiisa isbedelay. Waxa xiiso leh, geedo badan oo qiimo badan oo geedo iyo geedo kale ayaa sidoo kale ka mid ah qoyska Rosy: raspberry, tufaax, pear, duub, shimbir, cherry, strawberry.
Qaar ka mid ah milkiileyaasha guryaha waxay dusha sare u taagaan xayawaanka beerahooda ama meel u dhow dhismaha. Si kastaba ha ahaatee, dhaqanka ayaa caan ku ah sifooyinka iyo bogsoonaanta, iyo sida dhammaan waxyaabaha nool, ka soo baxa sunta sunta. Sidaa darteed qorshaha soo degidda ee ka fog waddooyinka mashquulka ah. Oo sidaas daraaddeed eeygu wuxuu ku faafay beerta oo dhan, wuxuu ilaaliyaa wareegyada isgoysyada ee ku dhow xawaarihiisii ​​20 cm. Haddii xaladani aysan ku habooneyn naqshadda, waxaad ku dari kartaa ciidda iibsanaya deyrka qurxinta ee qoto dheer.
Ma taqaanaa? Ubaxyada ubaxyada ubaxa waxay furan yihiin 4-5 galabtii, oo waxay seexdaan 7-8 fiidkii.
Qawaaniinta geedaha duurjoogta ah
In beerta, duurjoogta Rose waxaa lagu beeray karaa saf ama pertain. Waxaa muhiim ah in laga tago masaafo qiyaastii 1.5-2 m inta u dhexeysa baadiyaha. Geedo laba sano jir ah ayaa ugu habboon beeritaanka; Marka laga beerto geedo daaqsiyo ah oo geedo ku baxa maaha mid dhab ah. Haddii aad qorsheyneyso in aad sameysid rooting guga, dayrta hubi inaad bacrimiso ciidda. Si arrintan loo sameeyo, bartamaha bisha, markaad qallajinayso sawirka, xidh dhafka ama dhoobo culus oo qoto dheer leh 30 cm. Qiyaastii 6-7 kg oo kalluunka ah waa in uu ku dhaco mitir laba jibaaran oo dhul ah. Xaaladda beeritaanka dayrta ee geedo, bacarimis waa in la diyaariyaa bil ka hor.
Guud ahaan, eyga ayaa kacay, sida ay sheegeen dadka guryaha leh ee horey u soo iibsaday, way fududahay in la beero oo daryeelo. Si ay sapling si aad u hesho xidid si fiican oo dhakhso ah u tagaan koritaanka, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo niyad jabka ah ee 30 cm. Haddii ciidda aan la bacrimiyey, waxaa ka wanaagsan in godka qodo oo qoto dheer - oo ku saabsan 80 cm ballaaran iyo 50 cm qoto dheer. Dusha hoose ayaa la miiray, rusheeyeen dusha sare leh lakabka yar ee substrate ah, rhizomes waa la yareeyaa loona riixay, isku dar ah isku dar ah compost iyo daaha sare ee dhulka. Beerta qaar ka mid ah ku talinaynaa ku daray 100 g superphosphate iyo 30 g oo ah cusbo potassium sida bacriminta. Kadibna waxaad u baahan tahay inaad u diyaarsato baadiyaha si fiican. Ujeedadaas awgeed, waxaad u baahan doontaa 8 baaldiyo oo kala duwan oo biyo ah. Ka dib dhan, waxaad bilaabi kartaa wareegyada pristvolnyh mulch. Tani, jinka peat wuxuu noqon doonaa wax aad u fiican, waa ku filan in ay soo saaraan lakabka 3 cm ka.
Ma taqaanaa? Archaeologists inta lagu guda jiro xayiraad laga sameeyay Switzerland waxay caddeyn u tahay in dadku isticmaalaan duurjoogta duurjoogta xilliga barafka.
Talooyin Dheeraad ah Hip Hip Care
Wixii si buuxda xilli sii kordhaya iyo geedo badan oo fruiting waxay u baahan yihiin inay abuuraan xaalado gaar ah. Waa maxay xaqiiqda, waxaan u aragnaa si habboon.
Xayawaanka duurjoogta ah ayaa si aad ah ula qabsan kara abaarta, sidaa daraadeed ma dalbo habab qoyan oo joogto ah. Waxaa intaa dheer, xididdadiisa waxay si madaxbanaan u gaari kartaa lakabyada dhulka qoyan. In kulaylka, waa in la daadiyo wax ka badan 2 baaldiyo biyo ka yar baadiyaha yar yar, iyo qiyaastii shan ka mid ah mid ka mid ah galay galay marxaladda fruiting. Bannaanka beerta ayaa sheegaya in xilliga kuleylka lagu waraabiyo wax ka badan 4 jeer. Ka dib qoyaan kasta, substrate ee wareegyada ee jir waa in la doorbidaa loosen iyo mulched.
Bacriminta waqtiga loo yaqaan waa muhiim in eyga u kaca sanadaha ugu horreeya noloshiisa, iyada oo aan lahayn, daryeelida geedka guga waa mid aan la xariiri karin, iyo tijaabada hore uma baahna quudin dheeraad ah. Hannaanka ugu horeeya waa in la qorsheeyaa badhtamaha Maarso, labaad - bartamaha xagaaga, saddexaad - bilawga xilliga dayrta. Qaar badani waxay tixgeliyaan xalka bacriminta ugu fiican ee ka yimaada digada digaaga ama walxaha nitrogen-ku jira.
Dhirta midhaha ah ayaa la quudiyaa 3-dii sannadoodba mar. Si loo dhammeeyo, guga ka yar geed kasta si ay u sameeyaan ilaa 3.5 kg ee humus ama compost.
Ma taqaanaa? Xirfadlayaashu waxay u isticmaalaan duurjoogta sida sheyga loogu talagalay inanku.
The rosehip trim marka hore wuxuu bilaabmaa guga isla markiiba ka dib markii laga beerto. Shimbiraha sharafku waxay u baahan yihiin inay ka saaraan dhammaan laamihii on seedling, ka tago toban cm caleemo ka sareeya ciidda. Beerta qaar waxay hoos u dhigtaa khadka la jaray ilaa 5 cm Tani waxaa la sameeyaa si loo hubiyo in dhirta ay si fiican u duurka. Mustaqbalka, waxaa lagama maarmaan u ah in la dhejiyo taajkii 3dii sano oo kasta. Si kor loogu qaado dhalidda isla markiiba waxay ka sameeyaan 15 caleemo. Xaaladdan oo kale, hubso in xayawaanku ay ahaayeen sanooyin kala duwan, waana mid suurad wacan in midkoodna aysan jirin xaalado ah in ka badan 7 sano jir.
Gooyo waa in la fuliyaa guga, inkasta oo ay jiraan buug gacmeedyada ku saabsan qoraallada dayrta. Xaqiiqdii, khabiiro waxay aaminsan yihiin in xayawaannada duurjoogta ah ee la jajabiyey, oo dhaawacmay intii lagu jiray burburkii hore iyo tan laamaha, ma awoodi doonaan inay ku noolaadaan xilliga jiilaalka. Waxa kale oo muhiim ah in aan la yareeynin geeddi-socodka illaa heerka aan la fahmin ee sprouts, sababtoo ah natiijooyinka ka mid ah manipulations sida soo socota guga soo socda ayaa baadiyaha siin doonaa badan oo caleemaha yar yar oo aan haysan waqti ay u bislaadaan for fruiting.
Waa muhiim! Si horumarinta wanaagsan ee geedaha ee wareegyada pristvolnyh, waxaa muhiim ah in si joogto ah nadiifiso haramaha iyo furo.
Nooca duurjoogta, nasiib daro, waxay u nugul yihiin bronzovka, duqsiyo kala duwan iyo sawaaqyo, caarada caarada, caleen-caleen, xayawaan, kooxo iyo weelils raspberry. Cayayaanka Kuwani waxay si naxariis darro ah u waxyeeleeyaan afkoda, nuugaan casiir ka soo baxa iyaga, cuni caleemaha iyo xididdada, waxyeelo berry ah. Dhirta ay waxyeeleeyeen waxay u muuqdaan kuwo aan nooleyn waxayna u dhali karaan miraha xun. Marka lagu daro cayayaanka, xayrta maqaarka, dhoobada, madow iyo caddaanku waxay keenaan khatar ku ah geedo. Si taxadar leh u eeg eeyga oo kacsan, falanqee sida ugu dhakhsaha badan ee uu u korayo. Caleemaha iyo caleenta waa inay ahaadaan kuwo nadiif ah, caleemaha xitaa iyada oo aan loo baahnayn. Huurada ama lakab kasta oo ka mid ah taarikada caleen waxay muujinaysaa cudurrada.
Jooji horumarka cayayaanka ayaa noqon kara sunta cayayaanka, iyo marka laga eego aragtida kahortaga ah, ka saarista cirifka jirridda jiran iyo bukaanka, nadiifinta caleemo dhaca iyo qodidda godadka pristvolny waa haboon.
Si loo xakameeyo cayayaanka beerta iyo beerta u adeegsiga cayayaanka sida "Aktara", "Calypso", "Alatar", "Nurell D", "Kinmiks", "Detsis", "Bi-58".
Cudurrada cagaarshow waxaa lagu daaweeyaa 3% oo ah fitamiin buluug ah, daaweynaya duurka ka hor inta aanaan ku hari ubaxyada. Xaaladaha infekshannada daran, ka saar Nitrofen, Fundazole, iyo Topsin. Ka takhalusi cunista caleemaha lamid ah waxay caawin doonaan "Karbofos." Dhamaan khubarada nadiifinta jeermiska ayaa ku talinaya in ay qabtaan bil ka hor, marka duurjooggu uu bilaabo inuu bislaado.
Ma taqaanaa? Astaamaha ascorbic acid ee berry waa 50 jeer ka badan liin.
Qoyaanka dabiiciga ah iyo barafka ka sareeya 20 digrii ayaa u dhintey inay yihiin jilicsan duurjoogta. Waxay si gaar ah u dhibaatoonayaan xagaaga qaboobaha iyo roobabka, sababtoo ah xaaladaha cimiladu uma oggolaanayaan xooraha in ay maraan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah isku diyaarinta jiilaalka. Sidaa darteed, iyada oo aan caawimaad qof, eeyga Rose ah ma noolaan karaan ilaa guga.
Intaa waxaa dheer, bacriminta aan haboonayn leh arrin bani'aadan ah, isbedelka cimilada qaboobaha iyo boogaha degdega ah iyo dhirta daran waxay saameysaa jiilaalka. Waa suurtogal in la go'aamiyo sprouts in aan jiilaalka aan la isticmaali karin bilowga bisha October - waxay ku kala duwan yihiin caleemo cagaaran oo madow ku yaal. Geedo yar yar ayaa u baahan fiiro gaar ah. Waa inay qasab noqdaan inay duubaan kahor bilawga xilliga hawada qabow. Qalabka ugu fiican ee bannaanka u taqasusay waxay tixgeliyaan peat, caleemaha dhacday, sida balka, baco balaastiig ah iyo burka. Ma aha oo kaliya duurka, laakiin sidoo kale nidaamka xididka u baahan yahay ilaalinta. Sidaa darteed, wareegyada pristvolny waxaa ku dhaca mulching.
Waa muhiim! Laamiyo saytuunka, kuwaas oo inta badan lagu dhigaa ku xoortay geedihii yar yar, ma aha iyaga loogu talagalay ilaalinta ka soo dhaxan. Inta badan, tani waa caqabad jilicsan oo ah hunguriga gaajada iyo kaydinta barafka.
Goynta iyo kaydinta miskaha
Iyada oo ku xiran markaad ka soo goosato baadiyaha, waxay ku ururin doontaa nafaqooyinka. Berry bisil waxay heli karaan dhalaalaya guduud oo casaan ah waxaana lagu kala soocaa qaab dhismeedka jilicsan. Sidaa darteed, haddii qorshooyinkaaga aad ku qallajisid miraha, waxay u baahan yihiin in la nadiifiyo - maqaarka adag ee adag. Waa inaad sidoo kale fiiro gaar ah u qaadataa septs: haddii ay geesaha si adag loo cadaadiyo si berry ah - beergooyska waa waqti hore, waxaad u baahan tahay inaad sugto. Hooyo ayaa kugula talinaysa inay jeexdo jilibka guntiisa oo la lug leh cawska si marka la goosanayo alaabta ceeriin ee ceeriin ee casiirku ka soo baxeen. Marka berry qallajiyaan, way baabi'i doonaan. Qorshee shaqadaada ka hor bilawga cimilada qabow, sababtoo ah heerkulkoodu hooseeyo waxay u sharxeysaa fiitamiin C miraha.
Ku kaydi miro la soo ururiyay waxay noqon kartaa noocyo kala duwan. Hooyooyinka qaarkood waxay si fudud ugu qallajiyaan foornada ama gudaha (meelaha ka baxsan raajada ultraviolet). Qaar kalena waxay ku rusheeyeen qori duuduuban, guntinta guntay ama diirran. Qalabka qallalan ayaa yaraada gacanta ku dhuftay, si ay u dhacaan asliga ah. Kadibna waxaa lagu xiraa weelal qallalan oo leh dabool ama bacaha wax lagu duubo, dhalooyinka quraaradaha. Si adag u xir xiraha alaabta ceeriin la soo ururiyey si adag waa mamnuuc. Xaaladahan oo kale, waxay ka sii dari kartaa oo ay ku dabooli kartaa caaryada. Waxaa fiican inaad isticmaasho daboolka nacnaca ama daboolka saddexlaha ah.
Waa muhiim! Farshaxanadu waxay ubaahan yihiin hal usbuuc in ay u guuraan ka dib markii qalajinta. Wakhtigaas ka dib waa la wada baabbi'in karaa.
Waxaa jira habab badan oo lagu helo geedo geed leh: Botanistu waxay tijaabin karaan miraha, bannaanka u shaqeeya si joogta ah waxay doorbidi doonaan isugeynta qanjidhada xididka ama qaadidda. Waan fahmi doonnaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan natiijada tiknoolajiyada kasta.
Si aad u hesho eey ka soo kacday miraha, waxaad u baahan tahay inaad soo ururiso wax beerto dhamaadka xagaaga. Wixii brown this, berry dhirta weli waa ku habboon. Khubarada ayaa sheegaya in maadada noocan oo kale ah ay leedahay boqolkiiba inta ka badan biqilka, sababtoo ah ma aysan sii wiiqmin dusha sare. Beerto waxaa loo qorsheyn karaa gu'ga ama dayrta, laakiin waxaa fiican in aan mawduuc laga dhigin tijaabooyinka jiilaalka. Macdanta ayaa si qasab ah loo dhajiyay, ka dibna lagu qasay 1 qayb oo ah peat iyo 4 qaybood oo caano ah. Ku rid isku dar ah sanduuq leh dabool quraarad ah oo u qaad mishiinka, walaaqaya waxyaabaha ku jira aqalka dhirta lagu koriyo si wakhti ah. Guga waxaa la dhigay meel diiran. Waxaad u isticmaali kartaa hab kale, adigoo ku beeri doona dhulka oo ku rusheeya top of humus. Ka dibna sariirta waa in lagu daboolaa filim, si loo hubiyo geesaheeda. Marka caleemaha u muuqdaan inay leeyihiin 2 caleemo, waa la bedeli karaa.
Waa muhiim! Beerta qunyar-socodka ahi waxay saameyn xun ku yeelanaysaa bukaanada qaba thrombophlebitis iyo endocarditis.
Sida loo faafiyo gooynta cirifka, waxaa naloo sheegay shaqaalaha xannaanada, tanina waa tan ugu caansan. Wuxuu ku xiran yahay dhammaan noocyada iyo noocyada dhaqanka. Si loo fuliyo qorsheyaasheena, waxaa ku filan in la jarjaro dhalooyinka caleenta cagaaran todobaadyadii la soo dhaafay ee bisha June si ay ugu helaan saddex internodes ah. Khadka la jaray waa inuu kudhow meel u dhow meesha ugu dambaysa. Ka dibna wax lagu beerto waa in lagu daaweeyaa kiciyaasha kobaca ("Heteroauxin", "Emistim") iyo ka dib wakhtiga lagu qeexay tilmaamaha diyaargarowga, dhulka ku jira substrate diyaarsan. Si arrintan loo sameeyo, qaybo isku dhafan oo isku dhafan oo ka mid ah ciidda webiga, peat iyo dhulka caleen. Ka dib marka la sameeyo foornooyinka la qabadsiiyay sariirta waxaa lagu daboolay filim.
Labada toddobaad ee ugu horeeya, gooyn cagaaran u baahan badan oo qoyaan, sidaas darteed ha ilaawin waraabinta joogto ah ee dhulka. Ilaa iyo inta xuduuduhu ka muuqdaan, biyaha waa la yareyn karaa. 25 maalmood ka dib, goyntaadu waxay qaadan doontaa xidid. Marka aad aragto kororka ugu horreeya ee ku saabsan, sii wad dhirta dhirta: inta lagu jiro maalinta, ka saar filimka dhowr saacadood, si tartiib tartiib ah u kordhineyso waqtiga.
Waa muhiim! Rosehip faafin by grafting ku hari iyo gooyn. Way ka fiican tahay in la sameeyo qaababka "eyga".
Ku naafo by suckers xididka
Nidaamkan soo saarista geedi-socodka ayaa la doortaa marka ay lagama maarmaan tahay in la ilaaliyo sifooyinka sheybaarka koritaanka waalidnimada, iyo sidoo kale marka aysan jirin wakhti diyaarinta dheer iyo qabowga geedo. Waxyaabinta Beeraha laga soo qaaday dhirta xoogga leh iyo caafimaad leh leh dhalid wanaagsan. Wax soo iibsiga waxaa la samayn karaa bisha Oktoobar ama Maarso, taas oo ku xidhan hadba inta aad qorsheynayso inaad degto. Waxa ugu muhiimsan waa in rooting ah dhacdo dhul dhul diiran oo ka hor bilaabashada dhaxan. Dhalinyaradu waa inay noqdaan ilaa 40 cm oo sarreeya, oo leh fiiqan fiiqan ayaa laga soocaa geed, ama, liddi ku ah, marmarka qaarkood waxay kufadhiyaan oo ay u waraabin jireen si weyn. Iyada oo ay sabab u tahay daryeelkan, baadiyaha waxay soo gashaa xididada kale ee dheeraadka ah waxayna xoojiyaan. Sannad ka dib, waa la kala saari karaa loona beddelaa meel la qorsheeyay. Warshadani uma baahna daryeel gaar ah, laakiin waxay kuugu mahadcelineysaa qadarka ugu yar ee 100 jeer. Guga, marka uu blooms, duur raacay ku farxi doonaa qurxinta iyo xajmiga, iyo xilliga qaboobaha - iyada oo leh berry bogsiinaya, taas oo u qalantaa loo tixgeliyo kaydka fitamiinada.